Ny karazam-biby manafika dia mety hiteraka fahasimbana mafy sy maharitra amin'ny toeram-ponenana idirany amin'ny alàlan'ny fampihenana ny habetsahan'ny karazam-biby teratany ary koa ny fanovana ny rafitry ny tontolo iainana sy ny fizotrany. Ho fanampin'ny fiantraika ara-tontolo iainana toy izany dia mety hiteraka fatiantoka ara-toekarena ho an'ny vondrom-piarahamonina sy ny indostria eo an-toerana ihany koa ireo karazana manafika.
Ny vato harana voarakotra amin'ny algà manafika any Hawai'i. Sary © Ian Shive
Misy fomba efatra lehibe tafiditra amin'ny fitantanana ireo karazana invasive:
Ny fisorohana no fiarovana voalohany sy tsara indrindra amin'ny fitantanana ireo karazana invasive. Mba hisorohana ny fidiran'ny karazana invasive dia zava-dehibe ny mahatakatra ny fomba fitaterana sy fampidirana ireo karazana invasive. Ny fomba fampidirana mahazatra indrindra dia ny rano ballast, biofouling ny vavonin'ny sambo, ary ny famotsorana ireo biby fiompy tsy ilaina sy ny hanjono. Any amin'ny faritra na eo amin'ny firenena, ny politika sy ny fitsipi-pifehezana dia tokony hapetraka mba hampihenana ny loza ateraky ny fampidirana amin'ny alàlan'ny fomba fampidirana mahazatra indrindra.
Amin'ny fahafantarana fa ny fihetsehan'ny sambo no loharanon'ny fanafihan'ny karazana, dia misy fitsipika maromaro sy fomba fanao tsara indrindra azo ampiasaina hampihenana ny loza ateraky ny haran-dranomasina. Ohatra, misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMarine Biofouling and Invasive Species: Guidelines for Prevention and Management manokatra fisie PDF dia ahitana ny fomba fitantanana tsara indrindra ho an'ny fiarovana ny fepetra fanodinkodinana dia ampiharina amin'ny sambo, ny fepetra fanaraha-maso eo amin'ny sisin-tany, ny fandaharam-pidiovana, ny fitaovana fanadiovana ary ny fepetra fanadiovana.
Ny fanaraha-maso ny tontolo iainana dia tokony hatao amin'ny fomba ara-potoana sy ara-potoana mba hahitana ny fampidirana aloha loatra ka azo atao ny valiny haingana. Matetika ny hany fomba hamongorana ny karazan-javamaniry manafika dia ny fihetsika aloha loatra amin'ny fizotry ny fanafihana alohan'ny hiparitahan'ny aretina. Mitaky loharanon-karena, drafitra ary fandrindrana ny ezaka fitadiavana aloha. Ny karazam-biby manafika dia matetika hita ho kisendrasendra, fa ny olona sy ny mpiasa voaofana ihany koa dia mahita azy ireo amin'ny alalan'ny fanadihadiana momba ny karazam-biby misy lasibatra sy amin'ny fanaraha-maso ireo faritra manokana izay atahorana. Afaka manome fampahalalana manan-danja momba ny fiovan'ny toetry ny haran-dranomasina ihany koa ny tambajotran'ny fanaraha-maso ny vondrom-piarahamonina.
Ohatra, ny Hawai'i misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy maso amin'ny Reef Network dia mandray anjara amin'ny fiaraha-monina amin'ny fanaraha-maso sy ny tatitra momba ireo karazam-biby manafika an-dranomasina sy ireo adin-tsaina hafa amin'ny haran-dranomasina toy ny fandotoana ny haran-dranomasina, ny aretina ary ny fihanaky ny biby mpiremby.
Ohatra, misy programa fanaraha-maso ny lionfish manerana an'i Karaiba. Ao amin'ny Florida Keys National Marine Sanctuary, misokatra amin'ny varavarankely vaovaoManana fahazoan-dàlana manokana ny lionfisy Navoaka izao mba hanangonana trondro liona avy amin'ny Faritra Fitahirizana Masina (SPA), izay faritra tsy azo hanjonoana, tsy azo alaina. Any amin'ny faritra hafa ao Karaiba, toy ny Nosy Cayman, ny fandaharan'asa dia nifantoka tamin'ny famporisihana ny mpanjono eo an-toerana mba hisambotra lionfish ary hamporisika ny tsenan'ny liona amin'ny alalan'ny fanentanana fanabeazana, anisan'izany ny bokikely manazava ny fomba hikarakarana sy hanomanana trondro liona.
Mety ilaina ny famerenana amin'ny laoniny ny tontolo iainana raha toa ka tsy azo atao ny misoroka ny fahasimban'ny tontolo iainana amin'ny karazan-javamaniry manafika. Mitaky asa sy lafo ny famerenana amin'ny laoniny, noho izany dia tsy tokony hampiharina raha tsy efa nihena ho ambany ny fandrahonana avy amin'ny karazana invasive.
Raha mila fanazavana lalindalina kokoa dia raiso ny Coral Reef Resilience Online Course momba ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina. Vakio a famaritana ny Mazava ho azy na misoratra anarana rehefa dinihina.